Umculo omdala we-classic we-violin uhlale ufikelele kwiingalo, ufuna ukwazi apho ukhangele khona. Ezi khetho ze-violin zikhethwe ngokusekelwe kwingoma, ekuthandeni, nakuzo zonke izibhengezo. Nalu uluhlu lwabo bafuna ukukhulisa ama-horizons omculo wesikolo okanye umntu ofuna ukuhlaziywa kumculo omhle.
I-Lark ihla - uRalph Vaughan Williams
Eminye yomculo we-violin yomculo ibhalwe ngabaqambi kuquka uVivaldi, Vaughan Williams, Mozart, Haydn, kunye nokunye. I-Adam Gault Collection / OJO Izithombe / Getty Izithombe
Kubhaliwe kuqala nge-violin kunye nepiyano, uRalph Vaughan Williams wagqiba u -Lark Uhla ngo-1914, kodwa emva kokuthetha ngokuxhalabisa nge-violinist, utshintsho lwenziwe kwisiqwenga. Kwaye kwafika ngowe-1920, eso siqwenga senziwa kuqala. Ngomnyaka kamva, amanqaku e-Williams's orchestral agqityiwe kwaye ayenziwa kwiHolo yeNdlovukazi eLondon. UWilliams usekelwe kwi -Lark Ukunyuka kwiqonga lembhalo kwisibongo sesiNgesi, uGeorge Meredith, kwaye sifaka le ngcaciso ngaphakathi komsebenzi wakhe opapashwe.
Iingqungquthela ezine zeeNyanga - uAntonio Vivaldi
Iintsuku Zine zeVivaldi zanyatheliswa ngo-1725, kwisiqulatho seshumi elinesibini le-concerto elinesihloko esithi Il cement dell'armonia e dell'inventione ( Uvavanyo lweZinyaniso kunye neNtsholongwane ). Enyanisweni ziphakathi komculo onenkalipho yomculo wexesha elibhaliweyo. UVivaldi wabhala amanonti ngamanye amanqaku ukuze ahambelane nentshukumo nganye yeeNqunqwana ezine, ongayifunda apha, ukuqala nge-Spring Sonnet .
I-Concerto yee-violin ezimbini kwi-D encinci, i-BWV 1043-uJohn Sebastian Bach
UBach wayengumdlali wekhenikhi wenhlakaniphe (ukuqonda i-organ kunye ne-harpsichord) kunye nomqambi onamandla. U-Bach waletha umculo wama-baroque ekupheleni kwayo, ukubhala umculo malunga naluphi na uhlobo lwefomathi yomculo, kuquka ne-concerto ye-violin. I-Concerto yakhe yesiBini iVolin ingomnye wemisebenzi yakhe edumileyo, kwaye kufanelekile. Ixesha elibhaliweyo lobugcisa.
I-Sinfonia Concertante e-E flat flat, K 364-Wolfgang Amadeus Mozart
Imizamo kaMozart yokuqhawula umgca phakathi kwe symphony kunye nekonsathi yayiyimpumelelo xa ifika kwiSinfonia Concertante kwi-E Flat Major. Ehlanganiswe ngo-1779, ingoma yomculo yayiphumelele kulo lonke elaseParis. Nangona uMozart wabhala ezinye iintlobo zemisebenzi, le yodwa yodwa apho ayigqibe khona.
Por Una Cabeza - uCarlos Gardel
Ingoma ye-tango edume kakhulu emhlabeni, Por Una Cabeza , yabhalwa ngo-1935, nguCarlos Gardel, kunye namazwi ngu-Alfredo Le Pera. "I-Por Una Cabeza" ithetha "ngentloko" ngesiSpeyin; Ingoma ingomntu onomlutha wokugibela ihashe kunye nendlela awufanisa ngayo nothando lwabesetyhini. Le ngoma yomculo isetyenziswa kakhulu kwifilimu, kumabonwakude, nangaphezulu.
I-Violin Concerto no-2 kwi-B encinci, iMvmt. 3 'La campanella' - Niccolo Paganini
Abaninzi benu banokuzibona lo mculo kumbulelo kuFranz Liszt, owawuguqula waba ngumsebenzi wepiyano yomculo. IPaganini yabhala amanqaku okuqala ngo-1826, ngenxa ye-violin kunye ne-orchestra. Ingqungquthela yomculo eninzi owaziyo.
I-Violin Concerto kwi-D encinci, Op. 47 - uJean Sibelius
U-Sibelius wabhala enye i-concerto - le D Minor Concerto ngo-1904. I-violin yesi-solo iyinto eyi-virtuosic, kodwa ingekho ngaphandle komgca wemilo. I-concerto jikelele ibumnyama kwaye inzima, kodwa i-violin yenzakalisa isandi esicacileyo nesivuyo, ukulungelelanisa ukulinganisela kumanqaku.
Ikhonkco enkulu yeVolin Concerto - uJoseph Haydn
Nangona abaculi beemculo bengenakuqinisekiswa ngokususela kwimvelaphi yabo yonyani okanye umhla wokuqulunqwa, le khonsathi ichazwa kuHaydn . UHayn wabhala ii-concertos ezine, ezithatha ezintathu kuphela. I-Concerto No. 4 yinto engumzekelo wecala lomculo kunye nomculo we-violin.
I-Violin Concerto E Minor Op. 64 - uFelix Mendelssohn
I-Concerto ye-Violin ye-Mendelssohn e-E, eyaqulunqwa phakathi kwe-1838 neye-1845, ibe yinye yezona zikarhente ezenziwa ii-concertos zaso sonke ixesha. Ngenxa yokuba isakhiwo sayo sokwahlukileyo, kunye neenguqu zayo ezincinane ukusuka kwikodeti yeklasi yaseklasini, i-concerto yaseMendelssohn yayithandwa kakhulu ngexesha lokuqala kwayo. Enyanisweni, namhlanje kuthathwa njenge-concert efanelekileyo ukuba abaninzi abafuna i-violinists be-solo bazama ukuqonda ekuqaleni kwimi sebenzi yabo.
Iingqungquthela zikaDuke Ellington ze-Jazz Violin Sessions
Ingxelo ngo-1963, i-Duke Ellington ye Jazz Violin Sessions ngumculo omncinane kuloluhlu lomculo we-violin umhlabeleli. I-albhamu yakhululwa ngowe-1976. Ukuze ubhale umculo omnandi we-jazz, umqambi kufuneka abe nokuqonda okunzulu kwengcamango yomculo weklasi, kuba umculo we-jazz uyingqungquthela yomculo wesiqhelo. Ii-Ellington ze Jazz Violin Sessions zifudumala, ziyamema, kwaye zilula ukuphulaphula ngokuphindaphinda ngalo lonke usuku.
IziKharithi zeNtsapho zeMboleko kunye neziHlomelo
I-Oration (i-Classical Rhetoric)
Dynamic Duos yoMculo